Taratasim-baovao RV : Alaivo sary an-tsaina ny aterineto feminista iray · Global Voices teny Malagasy
Taratasim-baovao RV : Alaivo sary an-tsaina ny aterineto feminista iray
Voadika ny 20 Avrily 2022 8:16 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, English
Sary an'i Mohamed Hassan tao amin'ny Pixabay. Nampiasàna lisansa Pixabay.
Fanamarihan'ny Rising Voices: Ny taratasim-baovaontsika isam-bolana dia manome famintinana ireo lahatsoratra am-bilaogy vao haingana miresaka momba ny lafiny rehetra mahakasika ny fampiatiana nomerika, toy ny fidirana sy ny fampiasana fitaovana nomerika, ary ireo fomba sy hirika samihafa ho an'ny vondrom-piarahamonina mba handraisana anjara feno amin'ny aterineto. Vakio eto ny fanontàna teo aloha amin'ity gazety ity.
Manao ahoana ianareo, ry mpamaky malala? Antenainay fa ianao salama tsara no vantanin'ity gazetinay ity, anivon'ireo zavatra rehetra mitranga manodidina antsika.
Ao anatin'ity laharana ity, tianay hatosika ianao haka sary an-tsaina : Toy ny ahoana izany aterineto raha avy amin'ny fijery feminista? Niezaka ny Feminist Internet Research Network (FIRN) mba hampiseho amintsika, amin'ny alàlan'ny asan-dry zareo, ny aterineto amin'ny endriny ahalalàna azy ankehitrio sy ny mety hahatonga azy io ho tontolo iray mampiaty kokoa, raha ny resaka mahalahy sy mahavavy no resahana.
Raha mahaliana anao ny hahatakatra ny aterineto amin'ny alàlan'ny fakantsarin'ny feminista, mandrisika anao izahay hanopy maso ity tetikasa vao haingana an'ny FIRN ity, izay itondran'ireo mpikaroka antsika ho an'ny Ribeirão Grande/Terra Seca, Brezila, ireo fanamby misy sy ireo mety ho zotra amin'ny fanorenana iray fotodrafitrasa izay tena manana lanja kokoa ho an'ireo rehetra mpiara-mitan-tsoroka.
MISIMISY KOKOA AVY AMIN'NY BILAOGIN'NY RISING VOICES
Raha nanomboka ny fiarahan-dia amin'ny IDIL2022–2032 miaraka amin'ireo mpikatroka ho an'ny fiteny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, ny Rising Voices sy ireo mpiara-miasa aminy dia mitondra ho anao ny andiana fifandimbiasam-panentanana iray ao amin'ny Twitter. Liana amin'ny fitenin'ireo indizeny, vitsy an'isa, tandindonindoza, na tsy dia fahita firy ve ianao, ary ny anjara raisin'ny aterineto sy ny teknôlôjia ho fampiroboroboana sy famelomana indray azy ireny? Ndao hiaraka aminay dia henoy izay hozarain'ireo vahiny mpampiantrano !
@ActLenguas (Amerika Latina)
Leonardi Fernández [es] momba ny fiteny Wayuu, ampiasaina ao amin'ny firenena indizeny iray eo anelanelan'i Kpolpombia sy Venezoelà
Isela Xospa [es] momba ny fiofona iray avy amin'ny fiteny Nahuatl, ampiasana ao Milpa Alta, Meksika
Diego Hernández [es] momba ny fiteny Tutunakú, ampiasaina ao Sierra Norte of Puebla, Meksika
Elizabeth Quintana [es] momba ny fiteny Mazahua, ampiasaina ao afovoan'i Meksika
Amin'io zotra io ihany, ao Bangladesh, tsy ela akory izay no nivoaka ilay boky gramera voalohany vita amin'ny fiteny indizeny tandindonin-doza. → “Mitondra taratry ny fanantenana ho an'ny vondrom-piarahamonina indizeny ny boky fitsipi-pitenenan'ny teny Mro voalohany”
Ho an'ireo tetikasa mitovy tanjona amin-dry zareo amin'ny fanohanana ireo vondrom-piarahamonina ara-poko Aotearoa ao Nouvelle-Zélande dia misokatra izao ny fisoratana ao amin'ny Tahirimbola Fampiatian'ireo Vondrom-piarahamonina ara-poko, mba hisian'ny fandraisana anjara misimisy kokoa amin'ny sôsialy amin'ny alàlan'ny teknôlôjia nomerika. Afaka mahazo antsipirihany misimisy kokoa eto. Faran'ny fisoratana: 23 May 2022 amin'ny 11:59 alina
Miasa amina fanadihadiana iray momba ny vondrom-piarahamonina misy anao ve ianao, izay mazàna ny tantarany no tsy misy miraharaha na tsy dia heno loatra? Ny CrossCurrents Doc Funds dia te-hanampy ireo mpamokatra sarimihetsika, tsy ny avy ao Kanadà ihany, fa manerana izao tontolo izao, mba hampahafantatra ny tantaran-dry zareo, ho an'olona marobe kokoa. Fara-fisoratana: 1 Jona 2022
HIRIKA| VATSIM-PIANARANA & VATSIM-PIOMBONANA
Anatina fisaina iray mitovy ihany, ny Persephone Miel Fellowship dia misokatra amin'izao fotoana izao ho an'ireo mpanao gazety avy any ivelan'i Etazonia sy Eorôpa Andrefana, izay mandrakotra ireo tantaran'ny tany niaviany (sy/na ireo vondrom-piarahamonina mpifindramonina) ka maniry ny hanitatra ny mpanaraka azy ireo eo amin'ny sehatra iraisampirenena (eto ny antsipirihany).Fara-fisoratana: 24 Aprily 2022 Fanamarihana: Raisina manokana an-tanan-droa ireo tetikasa mampiasa ireo singa multimedia
ANTSO FANDRAISANA ANJARA
Ny 2022 Jamlab Accelerator Programme sub-Saharan Africa dia manasa ireo mpamorona liana amin'ny fomba handrafetana indray ny asa fanaovana gazety sy ny media ao amin'ny faritra mba handray anjara amina tetikasa virtoaly iray maharitra 6 volana, izay mety hanampy hanafaingana ireo hetsika manokana ataon-dry zareo. Ny antsipirihany misimisy kokoa sy ny fepetra takiana afaka hita ato. Fara-fisoratana: 18 Aprily 2022 amin'ny 05:00 hariva (oran'i Afrika Afovoany)
Ny Loka 2022 Linguapax Iraisampirenena dia mitady fanendrena ezaka nahomby (nataon'olontsotra na anaty tarika) ary hatramin'ireo fomba fanao tsara manerana izao tontolo izao momba ny fandrosoan'ny fahamaroam-piteny sy ny fanomezana aina vao/fanetsiketsehana indray ireo vondrom-piarahamonin'ny fiteny. Ny antsipirihany misimisy kokoa dia azo jerena ato. Fara-fametrahana fisoratana: 31 May 2022
Miantso fisoratana anarana koa izao ny Loka 2022 Kurt Schork Iraisampirenena ho an'ny asa fanaovangazety. Iangaviana hijery ato ny antsipirihan'ny fisoratana anarana sy ny fepetra takiana mba ho voafantina hahazo ny Freelance Award, Local Reporter Award, sy ny News Fixer Award. Fara-fisoratana anarana: sasakalin'ny 31 May 2022 (GMT)
HETSIKA & KAONFERANSA HO AVY
Liana bebe kokoa hahafantatra momba ny fampivoarana eo an-toerana, ny fiovaovàn'ny toetrandro ary ny teknôlôjia vao mipongatra ao anatin'ny vaninandron'ny fandrosoana nomerika ve? Mbola fotoana izao hisoratana anarana ho amin'ny Vovonana Fampivoarana Nomerika Erantany 2022 (antsipirihany ato)! Daty: 4 May 2022
FITAOVANA & LOHARANO
Tsy nahita ny fandefasana mivantana ny MozFest 2022 ve ary maniry hanaraka ny hetsika momba ny fahasalamana ao amin'ny aterineto? Azoanao atao manomboka izao ny miantoka ny hahazoanao tapakila iray angatahana amin'ny Pay What You Can (omeo izay foinao) hidirana amin'ireo andiany efa voarakitra (sy maro hafa) hatramin'ny 25 Jona.
VAKIO BEBE KOKOA, JEREO ary HENOY
Gender digital divide – A gap that should be bridged [Ang] (Fivakisana Nomerika eo amin'ny lahy sy ny vavy – Hantsana tokony hotsentsenana) ao amin'ny Paradigm Initiative
The costs of exclusion: Economic consequences of the digital gender gap [Ang] [fr] (Ny sandan'ny fanilikilihana: fiantraika ara-toekarenan'ny hantsana nomerika eo amin'ny lahy sy ny vavy) ao amin'ny Alliance for Affordable Internet
Misorata hahazo ny Taratasim-Baovaon'ny Rising Voices
Isaorana i Eddie Avila sy Ameya Nagarajan tamin'ny fandraisany anjara tamin'ity taratasim-baovao ity.